यो अहिलेको पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । यो त बुर्जुवाहरुले चलाएको पार्टी हो – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
यो अहिलेको पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । यो त बुर्जुवाहरुले चलाएको पार्टी हो
लेखक : मोहनचन्द्र अधिकारी, कम्युनिस्ट नेता
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरुष हुन् मोहनचन्द्र अधिकारी । हालका कम्युनिस्ट पार्टीका अग्रज र गुरु मानिने अधिकारी वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरुमा अलिकति पनि कम्युनिस्ट चरित्र नभएको बताउँछन् । नेतृत्वमा कम्युनिस्ट चरित्र भए जनताले यस्तो दुःख नपाउने उनको भनाइ छ । नेपालका नेल्सन मण्डेला भनेर समेत चिनिने अधिकारीले राजनीतिक मुद्दामा झण्डै १७ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । तर लामो समय आफू संलग्न रहेको पार्टी अहिले सरकारमा भए पनि अधिकारीलाई वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को काम गराई पटक्कै चित्त बुझेको छैन ।
प्रस्तुत छ, उनै शिखर पुरुष अधिकारीसँग वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्को सरकार र सरकारले गरेका काम कारवाही बारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको साराशं हामी यहाँ उर्तान चाहन्छौ :
घरमै बसिरहेको छु । अध्ययन गर्ने, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन हेरेर समय गइरहेको छ । अहिले त फेरि लकडाउनको समय छ, बाहिर निस्कने कुरा पनि हुँदैन ।
मैले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेको छैन । यो सरकारमा रहेको पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि म भन्दिनँ । त्यसैले यो कम्युनिस्ट सरकार पनि होइन, यिनीहरु कम्युनिस्ट पनि होइनन् । यदि मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार भएको भए कोरोनाको महामारी हुँदा जनतालाई पाल्नु पर्दैन ? भोट माग्ने बेलामा चाहीँ जनताको सेवा गर्छु भन्ने अनि जनता अहिले समस्यामा पर्दा केही नगर्नेलार्ई कसरी कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको सरकार भन्नु ?
जनताले दुःख पाएका छन् । कोरोनाको महामारी छ । कोही विदेशमा अड्किएका छन् । कोही स्वदेशमै अलपत्र छन् । सरकार प्रभावकारी भएन । आफ्ना जनताप्रति सरकारले जिम्मेवारी पुरा गरेन ।
अहिले त मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ । कम्युनिस्ट सरकार त जनताप्रति बढी जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ?
कम्युनिस्ट सरकारले जनताको सेवा गर्ने हो । कमसे कम जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो । यो सरकारले ती काम गर्न सकेन । लाखौँ जनता विदेशमा छन् । ती कोरोना भाइरसको जोखिममा छन् । कति त मरिसकेका पनि छन् । उनीहरुप्रतिको दायित्व खोई ? त्यसैले यो सरकार बुर्जुवा सरकार हो । यिनीहरुले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचार पोलेर खाइसके ।
सबै काँग्रेसले लिएको नीति यिनीहरुले अनुसरण गरेका छन् । काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ तर अब काँग्रेस पनि रहने हो वा होइन भन्ने भइसकेको छ । जनताको सेवा नगर्ने, सहुलियत पनि नदिने, दुःख मात्रै दिने ? अनि कोरोनाले लकडाउन भएका बेला पनि जनताको बेवास्ता गर्ने हो भने यो सरकार हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ ? कसले बचाउँछ नेपाली जनतालाई ? सरकारको दायित्व होइन जनता बचाउने ? अनि विकल्प नखोजेर के गर्ने ?
जे भने पनि मुलुकमा जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले सरकार चलाएका छन् । जनताले अहिलेका कम्युनिस्टहरुलाई विश्वास गरेर नै मत पनि दिएका हुन् । तर सरकार बनाएपछि उनीहरुले जनताले लगाएको गुन बिर्सेको हो वा गर्न नचाहेको हो वा नजानेको हो ? यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
बिर्सेको पनि होइन । अरु देशका सरकारले आफ्ना जनतालाई अप्ठेरोमा खुवाएका छन्, पालेका छन्, उद्धार पनि गरेका छन् । त्यही भारतमा हेर्नुस्, आफ्ना जनतालाई पालेको छ । यो हाम्रो सरकारले पनि त हालत कमजोर भएका, दैनिक काम गरेर खानुपर्ने मजदुरहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो नि, त्यो काम सरकारको होइन ? यस्तो सरकारलाई जनताको पक्षको सरकार भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । जनताले भोट दिइहाले, उनीहरु सत्तामा पुगिहाले । ब्रम्हलुट गरेर आनन्द मानेका छन् । अब त जनताको उनीहरुलाई चिन्ता नै छैन । यस्तो वेलामा राहत दिनेभन्दा पनि पार्टी–पार्टी हेर्छन् । मेरो विचारमा यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्नुभन्दा पनि सबै पार्र्टी मिलेर सेवाको भावनाले चल्नुप¥यो । यस्तो सरकारलाई पर्खेरमात्रै पनि भएन । र, खड्गप्रसाद ओलीले ठिक ढंगले चलाउनुहुन्छ भने चलाउनुहुन्छ, होइन भने यस्तो सरकारको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । अर्को सरकार ल्याएर भए पनि जनताले बाँच्न पाउनुपर्छ ।
संविधानतः यो सरकार ५ बर्षका लागि निर्वाचित भएको हो । तर असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले जनताको रक्षा गर्न नसकेकाले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
जनताको सेवा नगर्ने, सहुलियत पनि नदिने, दुःख मात्रै दिने ? अनि कोरोनाले लकडाउन भएका बेला पनि जनताको बेवास्ता गर्ने हो भने यो सरकार हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ ? कसले बचाउँछ नेपाली जनतालाई ? सरकारको दायित्व होइन जनता बचाउने ? अनि विकल्प नखोजेर के गर्ने ?
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा र अर्ध सर्वहारा वर्ग र मजदुर किसान वर्गको हो । यो अहिलेको पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । यो त बुर्जुवाहरुले चलाएको पार्टी हो । त्यही भएर सरकार पनि निकम्मा भयो । विदेशी दलालहरुले जे भन्छन्, त्योमात्रै गर्छन् तर कम्युनिस्टको नाम बेच्छन्, त्यस्तो छ यो सरकार ।
तपाईले त अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै त्यो बेलामा जेल जीवन पनि बिताउनुभयो । उहाँको विचार पनि बुझ्नु भएको छ । के उहाँमा क्षमता नै नभएको हो र ?
मैले त उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई लामै समय भयो चिनेको । मसँगै उहाँ पनि जेल पर्नुभएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । ओलीजी गफ बढी गर्ने, काम कम गर्ने मान्छे हो । देखिहाल्नु भएको छ, आफ्ना नजिकका र मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गर्दा पनि कारवाही गर्नुपर्नेमा उल्टै संरक्षण गरिरहनुभएको छ भन्दा उहाँ कस्तो खालको मान्छे भनेर सबैले बुझिसकेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार कस्तो हुनुपर्दथ्यो तपाईंको विचारमा ?
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा र अर्ध सर्वहारा वर्ग र मजदुर किसान वर्गको हो । यो अहिलेको पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । यो त बुर्जुवाहरुले चलाएको पार्टी हो । त्यही भएर सरकार पनि निकम्मा भयो । विदेशी दलालहरुले जे भन्छन्, त्योमात्रै गर्छन् तर कम्युनिस्टको नाम बेच्छन्, त्यस्तो छ यो सरकार । त्यसकारण यस्तो बुर्जुवा सरकारलाई कसले भन्छ कमयुनिस्ट सरकार ? कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि त कमसे कम पनि जनताको हक र हितका लागि काम गर्ने, जनतालाई परेको पिरमर्का निवारण गर्ने, देशको आर्थिक विकास गराउनतर्फ लाग्ुनपर्ने हो । लाखौँ नेपाली जनता रोजगार खोज्दै विदेश गएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाएर यहाँ सरकार पालिएको छ । आफ्नै देशमा काम गर्ने र उब्जनी बढाउने माहोल बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ केही काम नै हुन सकेन ।
धेरै लामो समय तपाई पनि अहिले सरकारमा रहेको पार्टीमै रहेर राजनीति गर्नुभयो । तर धेरै निराशा व्यक्त गर्नुभयो । तपाईको निराशाले अरु जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ?
म के निराश हुनु ? म निराश छैन । म निराश भएको भए तपाईले मलाई सम्पर्क नै गर्न सक्नुहुन्न थियो । त्यसैले म जनतालाई पनि भन्छु, जनता पनि निराश हुनुपर्दैन । जनताले चाहे भने यस्ता सरकारलाई सजाय दिन्छन् । राजा–महाराजाहरुको सरकार त जनताले ढाले । अरु पार्टीका सरकार पनि जनताले ढालेका छन् । आन्दोलन गर्ने अधिकार त जनताको छ नि अझै । यो व्यवस्था त नेपाली जनताले रगत बगाएर र सहादत प्राप्त गरेर ल्याएको हो नि, त्यसकारण नेपाली जनता बहादुर छन् । उनीहरुले चाहेभने जस्तोसुकै सरकार पनि ढाल्छन् ।